Faahfahin Dagaalkii gobalka Bakool ku dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faahfahin Dagaalkii gobalka Bakool ku dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo Alshabaab
7th March 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Mareeg.com-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalo saacadihii u dambeeyay ka dhacay Gobolka Bakool, iyadoo Xoogaga Al-Shabaab ay bilaabeen weeraro ay kala hortagayaan Ciidamada Itoobiya ee ka mid noqday howl galka AMISOM.
Sida ay sheegayaan wararka dagaalo culus ayaa shalay gelinkii dambe ilaa xalay ka dhacayay deegaanka Rabdhuure oo maalin ka hor ay qabsadeen Ciidamada Itoobiya, iyadoo markii dambe ay isaga baxeen.
Inkastoo deegaanka ay isaga barakaceen dhamaan dadkii degenaa, hadana waxaa uu dagaalka aad u saameeyay guryo ka sameysa cooshado oo ku gubtay dagaalkii labada dhinac dhex maray.
Sidoo kale dagaal xoogan ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Xudur iyo Ceelbarde, iyadoo tiro dhowr jeer wadada loo galay Ciidamada Itoobiya oo ku soo wajahan Xudur.Wararka ayaa sheegaya in dagaal culus uu saakay waabarigii hore ka dhacay Tuulada Teed, halkaasoo ciidamo Itoobiyaan ku sugan yihiin, iyadoo uu jiro qasaare xoogan oo labada dhinac ka soo gala gaaray.
Labadii maalmood ee u dambeeyay ayaa dagaalo goos goos ah ka dhacayay Gobolka Bakool, tan iyo markii uu bilowday duulaanka ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ku doonayaan inay ku qaadaan deegaanada ay maamulaan Shabaab.
Hase ahaatee waxaa la sheegayaa in durba ay ciidamada huwantu wajahayaan iska caabin adag iyo qidado dagaal oo aanay horay u arag, kaasoo ay dejiyeen saraakiisha Shabaab oo ku aadan si ay uga hortagaan weerarada dhowrka jiho kaga soo socda.
Ma jirto ilaa iyo hada cid ka hadashay dagaaladan, hadii ay ahaan laheyd AMISOM, Dowladda iyo Shabaab, balse Maamulka Gobolka Bakool ayaa sheegaya inay kaabiga u saaran yihiin degmada Xudur.
Kenya Defense Forces May Have Killed Al-Shabaab Spokesman, Ali Dheere